Nezvedu | Hangzhou Powersonic Equipment Co, Ltd.
Rps-sonic, ine vaviri vechidiki vanoda ultrasonic zvakanyanya. Nhengo dzekutanga dzeRPS-SONIC dzine avhareji degree reBachelor's degree kana pamusoro. Ivo vanga vari muiyo ultrasonic indasitiri kweanopfuura makore mashanu uye vane hupfumi ruzivo mune ultrasound. Bhizinesi bhizinesi uzivi ndewekuti: Usasimudzire kusimudzira chero chigadzirwa, tsvaga icho chakakodzera chigadzirwa kumutengi. Saka pamberi peakarongeka ega ega, isu tinosimbisa zvese izvo ruzivo, kusanganisira ruzivo rwekushandisa, mamiriro ezvinhu emidziyo, ruzivo rwakananga ruzivo.
Gore risati rasvika 2012, isu tinongotengesa yechipiri branson / dukane / rinco / herrman / telsonic yekutengesa michina, mukati memakore makumi maviri aya ekuvandudza, tinoona, vanhu vazhinji uye vazhinji vane dambudziko nechikamu chepakati cheiyo ultrasonic yekutengesa michina -generator uye transducer, saka isu tafunga kutanga bhizinesi redu re transducer uye jenareta redu redu transducer uye jenareta. Vazhinji vekupedzisira mushandisi vanosangana nedambudziko re transducer, havazive kuti nei transducer yatyoka, uye vachichinja iyo inodhura transducer rimwe nerimwe. Chaizvoizvo, imwe branson / dukane / rinco transducer inogona kushandisa 10 ~ 30 gore, kunyangwe iyo yakachipa kwazvo mutengesi inogona kushandisa makore mashanu. Saka panofanira kuve nezvimwe zvikonzero kana mutengesi wako akatyoka mugore rimwe. Ndosaka tichida kuvaka Rps-sonic, isu tinofanirwa kubatsira akawanda ekupedzisira mushandisi kuti azive zvakawanda nezve transducer, kushandisa ultrasonic michina zvirinani, kuchengetedza mutengo kana uchisangana nedambudziko.
Izvo zvakafanana kune jenareta, Kuita kusanzwisisika kunogona kupfupisa iko kushandisa-hupenyu hweiyo ultrasonic jenareta. Saka isu tinofanirwa kugadzira yehunyanzvi kubvunza tisati tashanda ultrasonic yekutengesa muchina. Iyo yakakosha poindi yeiyo ultrasonic muchina ndeye resonance, chete chengetedza yega yega chikamu mune resonance inogona kuita iyo system mune yakanakisa basa nharaunda.
Kusvika parizvino, isu tichine yakawanda yeBranson / dukane / rinco / herrman telsonic yekutengesa muchina, kuti tikwanise kusimbisa yega yega mutengesi / jenareta yatakaita inogona kuenderana neyakatanga muchina.
Ehezve isu tinogona kugadzira iyo transducer / jenareta kutsiva kwaBranson / dukane / rinco / herrman telsonic yekutengesa muchina, isu tinogona zvakare kugadzira transducer / jenareta kune chero iko kunyorera kweako ultrasonic michina. Isu tinopa OEM sevhisi yevatengi vekunze, isu tatova nevatengi veOEM muUSA neGerman.
Kana iwe uine chero dambudziko munzvimbo ye ultrasonic, gamuchira runhare Rps-sonic.